Internet Explorer: manova ny haben'ny sary amin'ny editor HTML miorina amin'ny Internet | Martech Zone
Internet Explorer: manova ny haben'ny sary amin'ny editor HTML miorina amin'ny tranonkala
Alakamisy, Septambra 7, 2006 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Ity misy ohatra iray, amin'ny fampiasana ny tonian'i TinyMCE:
Raha sokafanao ao amin'ny Firefox ity tonian-dahatsoratra ity dia ho hitanao fa ny fitarihana ny sary dia mitazona ny tahan'ny sary:
Na izany aza, amin'ny Internet Explorer dia tsy mihazona ny tahan'ny lafiny mihitsy izany. Azo atao ve ny manery ny refin'ny sary rehefa sintonina ao amin'ny Internet Explorer izy io? Nozahiko ny harato ary miakatra foana aho amin'ity iray ity! Nisy olona niasa tamin'ity olana ity ve tamin'ny famerenana ireo fananana avy amin'ilay zavatra DOM ary avy eo nanasokajy tsara ny sary vita? Izay torohevitra na fika rehetra dia hankasitrahana!
Sep 12, 2006 ao amin'ny 1: PM PM
Fanaraha-maso fotsiny… ny iray amin'ireo mpikirakira olana lehibe anay, Marc, dia nilaza fa afaka mampiasa hetsika keypress hanovana ny sary izy ary hitazona ny tahan'ny lafiny aorian'ny hetsika hisintona. Ireto misy loharanom-pahalalana nampitainy:
4 Feb 2008 tamin'ny 11:25 maraina
Niatrika an'io olana io ihany aho.
Azonao azafady mba ampio aho hamaha azy?